Iindaba-Intshayelelo emfutshane malunga nokuxubana okushukumayo kwe-ultrasonic kunye nokusasaza itekhnoloji
Ukuxubana okuguqukayo kwe-ultrasonic kunye nokusasazeka kwetekhnoloji kunxulumene nejet homogenizer, ngakumbi kwi-fluid enamandla ye-jet homogenizer. Itekhnoloji yayo engundoqo kukuhambisa ngamandla kwejet homogenizer。
Itekhnoloji yokuxuba kunye nokusasaza ngokwesiko ngokubanzi iyabuchaphazela ubuchwephesha besimbo, kwaye ukuxuba kunye nokusasaza kwetekhnoloji yitekhnoloji ye-ultrasonic yolwelo olunamandla.
Ngokomgaqo wokuveliswa kwe-ultrasound, i-ultrasound inokuhlulwa ibe ngamacandelo amabini: i-ultrasound yombane kunye ne-hydrodynamic ultrasound. Nangona i-electro-ultrasonic jet homogenizer inefuthe elihle lokulungelelanisa kwiincindi zamanzi, ifuna izixhobo zombane zangaphandle, iindleko eziphezulu, ukusetyenziswa kwamandla amakhulu, kunye namandla amancinci okusebenza, ngenxa yoko ayifanelekanga ukusetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso; ukusetyenziswa hydrodynamic cuke jet homogenizer Fluid (ngesiqhelo irhasi okanye ulwelo) isetyenziswa njengesixhobo esinamandla sokuvuselela ingcongolo kwijet homogenizer ukungcangcazela. Xa ubuninzi be-jet engaphakathi engaphakathi iyahambelana nobuninzi bendalo yengcongolo, isandi senzeka kwaye amaza e-ultrasonic akhutshwa. Ngaphantsi kwesenzo sokuqina kwesandi esiphakamileyo se-ultrasound, kuveliswa ubushushu obuphezulu, obuphucula umthamo wokuxubana kolwelo oluphambili kunye nolwelo lwesibini, kunciphisa ubungakanani be-atomization fluid, ikhuthaza inkqubela phambili yokuphendula kwemichiza, ikhawulezisa amandla eendlela ezahlukeneyo ulwelo ukungena komnye nomnye, kwaye ibalekisa inkqubo yokuxubana, Ukuphucula ukufana kokuxubeka, kunye namawaka amaza othusayo asemoyeni avela kwicandelo le-cavitation, ngokuqhubekayo anempembelelo kumxube wamanzi, atyumze ulwelo lwesibini lube ngamasuntswana anobukhulu be-micron okanye i-nanometer, kwaye usasaze ngokulinganayo kulwelo oluphambili, Yenza isigaba esichithakeleyo.
Iiprojekthi zesicelo seemveliso zangoku zisebenzisa itekhnoloji yokuxuba kunye nokusasaza kwetekhnoloji:
1. Isixhobo sokulungiselela amanzi esine-hydrodynamic ultrasonic hydrogen
2. Isixhobo sokulungiselela ukusasazeka kwe-Hydrodynamic ultrasonic graphene
3. Inkqubo yamandla okulungiselela ukusela utywala ngeFluid
4. Inkqubo yokulungiselela amanzi ye-Hydrodynamic ultrasonic
5. amandla ombane inkqubo yonyango yogutyulo lwelindle